Mihemotra i YouTube Raha Misosasosa Ny Aterineto ao Korea Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2013 18:01 GMT
Ao Korea atsimo izay efa nozarina ny misosasoa amin'ny aterineto anisan'ny hainga-pikoriana indrindra manerantany, dia tsy mitsahatra ny itarainana hatrany ny YouTube noho ny fikatsokatsoany.
Saingy nahoana moa ity habaka mampiantrano lahatsary ity no miada-pikoriana loatra raha oharina amin'ny ambin'ny aterineton'i Korea Atsimo? Ny valiny dia mitoetra ao amin'ny tsy fanajan'ny orinasa matanjaka ao Korea Atsimo ny momba ny tsy fitongilanan'ny aterineto.
Fitsipika fototra ny tsy fitongilanany aterineto hiarovana ny fikoriana malalaky ny vaovao amin'ny aterineto amin'ny alalan'ny fandrarana ny mpanao tolotra aterineto amin'ny fampandehanana mafy kokoa na mora kokoa noho ny hafa ny habaka iray na amin'ny fanakanana ny mpanjifa tsy hiditra amin'ny tranonkala sasany. (Vakio eto ny nosoratan'ny mpanoratra ato amin'ny Global Voices Jae-Yeon momba ny adihevitra mafana momba ny tsy fitongilanan'ny aterineto ao Korea Atsimo.)
Ny fisongadinan'ny vohikalan-dahatsary mpitroka bande passante sy ny rindrambaiko tahaka ny YouTube, Netflix ary ny Skype, izay manasarotra sy mampiakatra ny masonkarena ho an'ny mpanao tolotra aterineto ahafahany mitazona ny halakin'ny fikorian'ny serasera ho an'ny mpanjifany, no mbola mametraka ny adihevitra momba ny tsy fitonginanan'ny aterineto ho tena zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay.
Na dia mampiroborobo amim-pireharehana ho firenena iray anisan'ny mandroso indrindra eo amin'ny teknolojia avo lenta aza i Korea Atsimo eto amin'izao tontolo izao, dia efa (nisy ny fotoana) toerana iray tsy nanana antra ho anny mpamolavola teknolojia madinika izay niady mafy nanaraka ny torolalana sy ny politika terin'ny governemanta fa voasakan'ny orinasa matanjaka vitsivitsy izay mifehy ny tsena. Ry Google sy YouTube moa efa nifanandrina tamin'ny fitondrana koreana tatsimo noho ny tsy fanarahana ny fampiharana ny fampiasana ny tena anarana.
YouTube avy amin'ny mpisera Flickr codenamecueball (CC BY 2.0).
Mpisera Koreana manana ny anarana :GaedokChoding namelabelatra [ko] ny fanadinoana nandritra ny fandinihana ny tsy fitongilanana amin'ny aterineto nokarakarain'ny mpanome tolotra aterineto Koreana tatsimo nitarika ny fiada-pikorian'ny YouTube – fomba fijery ny zavamisy [ko] iraisan'ny ao amin'ny fiaraha-monin'ny teknolojia Koreana:
1. Niezaka nametraka ny lohamiliny tao Korea Atsimo ny YouTube. 2. Manery ny YouTube handoa sara ny Mpanome Tolotra Aterineto rehefa mitroka ny serasera ny YouTube. 3. Namaly n YouTube hoe “nahoana aho no terena handoa rehefa misoratra anarana ny mpisera ka mandoa ny saran'ny aterineto hijery ny votoaty avy amintsika?” ka nanapa-kevitra ny tsy hametraka ny lohamiliny (serveur) tany korea Atsimo ry zareo. 4. Vokany, lohamilina avy amin'ny firenena manodidina no iavian'ny YouTube eto Korea Atsimo. 5. Ankehitriny, tsy maintsy mandoa saram-pikorianana amin'ny sampan-draharaha mpanolotra aterineto vahiny hafa ny mpanolotra aterineto koreana. 6. Fiafarany: miha-miadana ny YouTube Koreana ary mandoa volabe amin'ny firenenkafa ny Mpanolotra aterineto Koreana.
Ny sasany aza moa namorona tantara an-tsary [ko] manazava ny loharanon'ny olana sy ny adihevitra nivoaka eo ambanin'ny tantara an-tsary, ary maro ny mpisera aterineto no mizara ny zava-niainan'ny YouTube [ko] anatiny sy ivelan'i Korea Atsimo:
ID UsaUsaNyangNyang: YouTube ao Japana mety ho faingana kokoa noho ny habaka NicoNico Douga [habaka fifampizarana lahatsary malaza ao Japana]. Saingy, [hafa ny zavamisy] rehefa mijery lahatsary Koreana…
ID Caspian: Eto Etazonia aho izao ary tena malaky dia malaky tokoa ny YouTube. Afa-mijery lahatsary 1080p mivantana aho amin'ny hakanton'ny sary araka ny orizinaly.
ID Lucis: Marina daholo izany. Eto Philippines, mila ho andro iray manontolo no lany ahafahana mijery mivantana lahatsary ao amin'ny vavahadin-tserasera koreana tahaka ny Naver sy ny Daum. saingy afa-manaraka tsy mitapatapaka sarimihetsika maharitra adiny roa ao amin'ny YouTube ianao. Raha ampitahainy, mila paompiana folo minitra ny lahatsary maharitra iray minitra [ao amin'ny habaka koreana tahaka ny Naver sy ny Daum] vao azo jerena.
ID: Omby: Afa-mahatsapa ny fahasamihafana ianareo rehefa misera aterineto ivelan'ny tanindrazana. Ao Korea Atsimo, na dia firenena matanjaka ara-teknolojia sy manana aterineto hainga-pikoriana aza, dia mirezareza loatra ny YouTube. Moa tsy hafahafa tokoa ve raha haingana kokoa ny YouTube any amin'ny firenenkafa, izay miada-pikoroana lavitra noho ny an'i Korea Atsimo ny aterineto amin'ny ankapobeny.
Ny vahiny ao Korea Atsimo, izay efa zatra ny hatsaran'ny vitan'ny YouTube any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, dia maneho hevitra ihany koa amin'ny fitsitaitaikam-pikorianany, mandefa hafatra ao amin'ny forums mitady valiny.
Ny Bilaogera DamviWorld nitsikera [ko] ny fiasa mijery tampon'orona (tsy mahita afa-tsy ny akaiky) ataon'ny mpanolotra aterineto koreana:
Nandà ny fangatahan'i YouTube hisian'ny serasera maimaipoana ny mpanolotra aterineto koreana ka tsy nisalasala nandao an'i Korea ny YouTube. Satria efa fantatry ry zareo fa ny mpanolotra votoaty no mety hanana kokoa ny fifehazana. Nitombo isa haingana dia haingana tokoa ny mpisera YouTube Koreana.[…] Raha tsy nanana fomba fiasa tsy mijery afa-tsy ny tampon'orony ny orinasam-pifandraisantsika, ary nahalefitra kokoa tamin'ny fifampiraharahana tamin'ny YouTube, dia tsy nandoa vola miavosa tahaka izao ho an'i Shina sy japana [noho ny fampiasana ny lohamilina YouTube any amin-dry zareo] ho sara-pivezivezena.
Nasongadin'ilay bilaogera ihany koa fa ny habaka mpizara lahatsary jerena eo noho eo ao an-toerana, tahaka ny Mncast [ko], dia efa tsy niasa noho ny fepetra mavesatra loatra ataon'ny mpanolotra aterinety azy ireo:
Ny antony iray nampivelatra ny YouTube haingana tokoa teto Korea Atsimo dia noho ny fidarabohan'ny habaka maro eto an-toerana mpizara lahatsary hojerena mivantana. Bankirompitra tsirairay ny orinasa teto an-toerana noho ny tsy fahafahany mandoa vola miavosa noho ny fampiasana ny tambajotra.